ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ - Shwe Khit
မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေး ထားပါ တယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေ မှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေ ကိုလည်း ဖော်ပြပေး လိုက်ပါ တယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် အသက်….၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ် အတွင်း၌……
ဗုဒ္ဓဟူး သက်ရောက် ဖြစ်၏
သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရခြင်း အဖွဲအစည်းတစ်ခုအတွင်း ဝင်ရောက်ရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။ နားချိန်မ ရလောက်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေ လိမ့်မည်။
လွန်စွာပင်ပန်း လိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်သင့်သော ကာလဖြစ် သည်။ မည်သည့် အစားအသောက်ပဲ စားစားအရသာ မရှိဘဲဖြစ်နေ တတ်၏။
ဤကာလတွင် အမွေရခြင်း(သို)အမွေကဲ့သို့သော အမွေများ ပစ္စည်းများရခြင်းကြုံရတက်၏။ ဤကာလ အတွင်း လက်ခံ လိုက်လျှင် အလဟသ ကုန် သွားတက်၏။ အထက်လူကြီး ကြီးကဲ သူတို့က ကူညီမစ လိမ့်မည်။
ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ပုံတော်များဝင်လာလိမ့်မည်။ပဉ္ဇင်းခံရတတ်ခြင်း၊သီလရှင်ဝတ်ရခြင်းများ ကြုံရ တတ်၏။ အလုပ်တွင် မပျော် ပိုက်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်၏။ပြောင်းရန်စိတ်မကူးပါနှင့်ဦး ။ ပြောင်းလျှင်လဲ အဆင်မပြေ နိုင်ပါ။
ငွေဆုံးခြင်းပျောက်ခြင်း များကြုံ ရတက် ၏။ သူခိုးခိုး ခံရ တတ်၏။ ရှိသော ပစ္စည်းများကို ထုခွဲရောင်းချ၍ ငွေအကုန်အကျ များတတ် ၏။ ပြသနာဟောင်းများ ရောဂါဟောင်းများပြန်ပေါ်ပေါက် တက်၏။
ဆွေမျိုးသားချင်း ထဲမှ နာရေးကြုံ ရတတ် ၏။ အိမ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ရှိကဆေးရုံသို့ပို့ပါ။ အိမ်၌ မီးဖွားလျျှင် အဆင်မပြေဖြစ် တတ်၏။အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမ ှုများတန်းစီနေ တတ်၏။
အလှူရက် မင်္ဂလာရက် ရက်ရွှေခြင်းကြုံ ရတတ်၏။ လူငယ် လူရွယ်များမိန်းမခိုးခြင်း ယောကျ်ား နောက်လိုက်ခြင်း များ လုပ်လျှင် ဆွေပျက် မျိုးပျက်ဖြစ် ကုန်တတ်သော ကာလဖြစ်ပါ သည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်သွယ်သော ကိစ္စများ လူမျိုးခြားနှင့် တွဲပီး လုပ်ရသော အလုပ်များ အောင်မြင် လိမ့်မည်၊သွေးအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ် ကျခြင်း၊ခြေထောက်၊ခါး၊ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်းများ ကြုံရ တတ်၏။
မကောင်းသော အတတ်များနှင့် နှောက်ယှက်ငြင်း ခံရတတ်၏။ ရွှေဝင်ခြင်း ထွက်နေသော ရတနာပစ္စည်း များပြန်ဝင်ခြင်း များကြုံရ မည်။ ရောဂါ ဖြစ်တတ်၏။ စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကျေ ဖြစ်နေ လိမ့်မည်။
တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွင် ထီးဖြူကြီး လှူရင်း လိုရာ ဆုတောင်းပါ။ ကံကော်ညွန့်၊သပြေညွန့်၊ ခြေရင် းထားအိပ်၍ ရေမျောပါ။
အသက်…၂၊၁၀၊၁၈၊၂၆၊၃၄၊၄၂၊၅၀၊၅၈၊၆၆၊၇၄၊၈၂၊ ၉၀၊၉၈၊၁၀၆ နှစ် အတွင်း၌
စနေ သက်ရောက် ဖြစ်၏..
သင်သည် ယခုနှစ်အတွင် အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ အသစ်ရခြင်၊နေရာ ထိုင်ခြင်း၊မွမ်းမံရခြင်း၊ပြောင်းရွှေ ရခြင်းများကြူံရ တတ်၏။ ခရီးတို၊ခရီးရှည်များ သွားနေ ရလိမ့် မည်။ ထိုခရီးများသည်လဲ သင့်အတွက် အကျိုးထူးစေ ပါ လိမ့်မည်။
မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခု သင်ကြားရခြင်း၊ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်းများပြုရတတ်၏။ မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင် တတ်၏။ အလုပ်အကိုင်၌ ထိခိုက် တတ်၏။ ပြသနာကြီးစွာဖြေရှင်း ရတတ် ၏။
ပင်ကန္နား၊ အမှုအခင်းများနှင့် ပတ်သက် ရတတ်၏။ မိမိနှင့် တကွ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေးညံ့တက်၏။ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းရောက် ရတတ်၏။မီး၊လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်၏။အထူးသတိပြုပါ။လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်၏။
ရွေနှင့်ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။ သားသမီးလက်အောက်ငယ်သားနှင့် ပက်သတ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာ ကြုံရမည်။စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ်၏။ငွေဒလဟော ထွက်ခြင်း၊ငွေအတွက်ပြော ဆိုဖြေရှင်း ရခြင်းများ ကြုံရမည်။
မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းကအကူအညီကောင်းပေးလာလိမ့်မည်။သစ်၊သံ၊သွပ်ကိစ္စများ၊ရေတွက်ကုန်ပစ္စည်းကိစ္စများ အောင်မြင် အကျိုးပေး လိမ့်မည်။ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ဆွေမျိုး အကြီးအကဲ တို့က အကူအညီကောင်းပေး လိမ့်မည်။
ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ အိမ်သို့လာရောက်တည်းခိုလျှင် ဆုံးပါးသွားတတ်၏။ ခြေထောက်တွင် အန ္တရာယ်ဖြစ်တတ်၏။လုပ်ငန်းအသစ်
အစီအစဉ်အသစ်များ ပေါ်ပေါက်တတ်၏။ ယခင် နှစ်များက ကျန်ခဲ့သော ရွှေ၊ငွေ၊ရတနာများ ယခုနှစ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံး သွားတတ် ၏။ လောကဓံ တရား၏ မတရားညင်းပန်း နှိပ်စက်မှုကိုခံရပီး မမျော်လင့်ပဲ သံဝေဂ တရားရလိမ့်မည်။
အစိုးရနှင့် ပတ်သက်သော အမှူဖြစ်တတ်၏။ အစစ်အဆေး အမေးအမြန်း ခံရ တတ်၏ ။ သောကြာသမီး တစ်ဦး ညအိမ် လာမှ သင်၏ဒုက္ခများ လွတ်ကင်းလိမ့်မည်။
စနေနေ့ညတွင် အဝတ်ဟောင်းဝတ်အိပ်၍ မနက် တွင်ရေမျှောပါ အုန်းကို အချောသပ်၍ ထုံးဖြင့်”ဥုမ်”အက္ခရာရေးပြီး မီးထွန်းပါ။
အသက်…၃၊၁၁၊၁၉၊၂၇၊၃၅၊၄၃၊၅၁၊၅၉၊၆၇၊၇၅၊၈၃၊၉၁၊၉၉၊၁၀၇ နှစ် အတွင်း၌…..
ယုခုနှစ်အတွင်း သင်သည် စက်ပစ္စည်းများ စိန်ထည် ပစ္စည်းများဝင်မည်။လုပ်ငန်းသစ်လုပ်ရန်အကြံ အစည်ကောင်းများ အဆက်အသွယ်ကောင်းများပေါ်လာလိမ့်မည်။အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်လာ လိမ့်မည်။
ဤကာလတွင် ပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းသစ်ကြီးကြီးမားမားစရန်မကောင်းပါ။ငွေကံမကောင်းသေးပါ။ လာဘ်လဲ အလွန်ပိတ်နေ လိမ့်မည် ။ ထီးလဲ မထိုးသင့်ပါ။ ထီပေါက်လျှင် မိသားစု အတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွား ညံသွာ းတတ်၏။
လူမျိုးခြားက အကူအညီပေးလိမ့်မည် အောက်လက်ငယ်သားတို့က အကူအညီပေးလိမ့်မည်။ဟိုဟာလုပ် ရကောင်းနိုးနိုး ဒီဟာ လုပ်ရကောင်းနိုးနိုးနှင့် အချိန်ကုန် သွားတတ်၏။
အမှားမှားအယွင်းယွင်းဆုံးဖြတ်မိ တတ်၏။ မကြာမီ ကံကောင်းဘက် သို့ရောက်တော့မည်။ လောလောဆယ် သတိထား၍ သည်းခံ လိုက်ပါ။
မသွားချင်သောခရီးများ စိတ်ညစ်စရာ ခရီးများ သွားလာ ရတတ်၏။ အထက်လူကြီး ဆွေမျိုးအကြီးအကဲ တို့က မိမိအပေါ်အထင် လွဲတတ်သည်။သားသမီးများ ကျန်းမာရေးညံတတ်၏။ ရွှေထွက်မည် အိမ်ခန်း ဆိုင်ခန်း ကိစ္စများ အောင်မြင် မည်။
ကန်တော့ပွဲ နတ်အုန်းသီးတို့မှ အစို့ပေါက် လိမ့်မည်။ ခြေလက်မျက်ခြင်း ခါးနာခြင်းများ ဖြစ်တတ်၏။ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက် လိမ့်မည်။ လုပ်လျှင်အောင်မြင် မည်။ဘိုးတော်တု ဆရာတု များရောက် လာတတ်၏။ ငွေလူလိမ် ခံရမည်။ ခင်မင်သူ ချစ်သူကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ တတ်သည်။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနှင် မမျော်လင့်ပဲ လမ်းခွဲ ရတတ် ၏။ သားသမီးရှိက အိမ်မှ ထွက်သွား လိမ့်မည်။ ဤအချိန်အခါသည်”အဖေကို ကာပြန်ဖူးသော သီဟဗာဟု”ကဲ့သို့ဖြစ်နေလိမ့်မည်။
အသက်…၄၊၁၂၊၂၀၊၂၈၊၃၆၊၄၄၊၅၂၊၆၀၊၆၈၊၇၆၊၈၄၊ ၉၂၊၁၀၀၊၁၀၈ နှစ် အတွင်း၌ ..
ရာဟု သက်ရောက် ဖြစ်၏
သင်သည် ယခုနှစ် အတွင်း၌ အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့ရလိ့မည်။ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲများသို့ သွားခြင်း၊ ကလေးများကို ရုပ်ရှင် ပြသခြင်းများ ပြုလုပ် ရမည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စလုပ်ရ တတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် လည်း လွန်စွာအကျိုးပေးအောင်မြင်မည်။ ငွေအလွန်ရွှင်နေ မည့် ကာလဖြစ် သည်။
အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ ရတတ်၏။ ရွှေဝင်မည် ရတနာပစ္စည်းများ ဝင်မည်။ ဘုရားဆင်းတုတော် ပုံတော်များ ကြွလာမည်။
သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသော နိမိတ်ဖြစ် ပါသည်။ ဤကာလ အတွင်း စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့် တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ် ပါသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်သော် နှစ်ရည် ဒုက္ခတွေ့ တတ်၏။
အမှုအခင်းဖြစ်နေ သူကို ငွေမချေး ပါနှင့်။ အာမခံ မလိုက် ပါနှင့်။ သတိပြုရှောင် ကျဉ်ပါ။အိမ်ထောင်ရှိ သူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေကြီး စွာဖြစ် တတ်၏။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေး တတ်၏။
နာရေး ကိစ္စကို အကြောင်းပြု၍ ခရီးသွား ရတတ်၏။ ကတိ စကားများ ပျက်တတ်၏။ဆရာသမား ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်မပြေဖြစ် မည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ၊မိတ်ဆွေများနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရတတ်၏။
အစားမှား၊ဆေးမှားဖြစ်ချင်း သွား ဒုက္ခပေးခြင်း များကြုံ မည်။ မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စများ ကြုံမည်။ရေတွင်း၊ရေကန် ကိစ္စ များဆောင်ရွက် လျှင်အောင်မြင် မည်။ခရီးကိစ္စများ အထစ်အငေါ့ အဆင်မပြေ ဖြစ် တတ်၏။
၅၊၁၃၊၂၁၊၂၉၊၃၇၊၄၅၊၅၃၊၆၁၊၆၉၊၇၇၊၈၅၊ ၉၃၊၁၀၁ နှစ် အတွင်း၌ …
သင်သည် ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မိဘကို ကောင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် အချိန်ဖြစ်၏။စီးပွား သိသိသာသာ တက်မည်။သိကြား မလိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်များစွာမြင့်တက်သွားမည်။
လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မှုရမည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာခရီးများ ပြည်တွင်ပြည်ပ ခရီးများသွားရတတ်၏။ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူး တတ်ခြင်း၊အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်မားခြင်းများကြုံမည်။
သင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်း၊ပညာကောင်းရခြင်းများကြုံမည်။မိတ်ဆွေကောင်း၊ဆရာကောင်းများ တွေ့မည်။ အဖိုးတန် ပစ္စည်းများဝင်မည်။မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စ အဆင်ပြေမည်။ငွေရှာရလွယ်ခြင်း၊ငွေအဝင် အထွက်ကြမ်းခြင်း များကြုံလိမ့် မည်။
ရပ်ဝေးမှ စာများ၊အဆက်အသွယ်များ ရမည်။ ရန်များခြင်း၊ စကားများဖြေရှင် ရခြင်း၊ရင်းနှီးသူအားလုပ်ဖေါ် ကိုင်ဘက် များနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရခြင်းများကြုံ မည်။စိုးရိမ်ရလောက်အောင် မဟုတ်ပါ။
အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲများ နေရာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ အမှုအခင်း ရုံးပြင် ကန္တား နှင့်ပတ်သက် ရတတ်၏။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ အိမ်ထောင်ရှိသူးဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက် အတွက် စိတ်ညစ် ရတတ် ၏။
ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကျန်းမာေ အသည်းအသန် ဖြစ်တတ်၏။ လမည့်မွေးလ၊မွေးရက်အထိ၊အသုဘရှောင်ခြင်း၊ သင်္ချိင်းမြေ နင်းခြင်းများ မလုပ် ပါနှင့်
အထူးသတိပြုပါ။ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး ညံခြင်း လေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးညံခြင်း ဒူး၊နား ဒုက္ခပေးခြင်းများ ကြုံရ တတ်၏။ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများပေါ်လာလိမ့်မည် လုပ်လျှင်အောင်မြင် မည်။
အသက်..၆၊၁၄၊၂၂၊၃၀၊၃၈၊၄၆၊၅၄၊၆၂၊၇၀၊၇၈၊၈၆၊ ၉၄၊၁၀၂ နှစ် အတွင်း၌ ….
တနင်္ဂနွေ သက်ရောက် ဖြစ်၏
သင်သည်ယခုနှစ်အတွင်း၊ အလုပ်နေရာ၊အိမ်နေရာ၊ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းလုပ်ရတက်၏၊ လုပ်ငန်း အသစ်ပေါ်ခြင်း(သို့)လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်များပေါ်လာ လိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း၊လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတက်၏။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျ တက်သော ကာလဖြစ်၏။သင့်အနေနဲ့ စီးပွားအလွန်တက်နေပြီ၊ ချမ်းသာနေပြီဟု ဆွေမျိုးသားချင်း အပေါင်းအသင်းတို့က
အထင်ကြီးနေ လိမ့်မည်။ သူခိုး မျက်စိ ကျခံရသော ကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံရတက်ကြောင်းသတိပြုပါလေ။ခရီးအကျိုးပေးအေသာ ကာလဖြစ်ပါသည်။ဘုရားဖူးခရီးသွားရတက်၏။ကွဲကွာနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ပြန်ဆုံ မည်။
ရပ်ဝေးမှဆွေမျိုးသားချင်း များရောက်လာ တက်၏။ အိမ်သို့ အတောင်ပေါက်သော သတ္တဝါဝင်လာတက်၏။ ဝင်လျှင် နမိတ်ကောင်း ၏။ သွပ်၊သံ၊သစ် စသော သောကြာနံပစ္စည်းများ ဝင်လာတက်၏ ။
မိတ်ဆွေရင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တို့က ဒုက္ခပေး တက်၏။ မြေကိုအကြောင်းပြု၍စိတ်ညစ် ရတက်၏။ ရွေနှင့် အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းများ ဝင်လာ တက်၏။ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ဓာတ်တော်၊ရဟန္တာ ပုံတော်များ ဝင်လာ တက်၏
စက်ပစ္စည်းများ အသစ်လဲ ရခြင်း၊ ထွက်နေသော ပစ္စည်းများ ပြန်ဝင်ခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။ လက်ဝတ်ရတနာ ကျောက်ပြုတ် ထွက်ခြင်း၊ပျောက်ခြင်းဖြစ် တက်၏။
ဤကာလသည် ငယ်ရွယ် သူများအဖို့ အချစ်ရေးတွင် လမ်းခွဲရလောက်အောင် ပြသနာဖြစ်ရတတ်သော ကာလဖြစ် ပါ၏။ အလှူအတန်း ကိစ္စ၊ မင်္ဂလာကိစ္စ ရက်ရွှေ့ရတက်၏။ အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အပြိုင်အဆိုင် ကြီးစွာကြုံ ရတတ် ၏။
မည်သည့်ဘုရားတွင် မဆို သောကြာနေ့နံနက်တွင် ဗုဒ္ဓဟူးဒေါင့်ကို သွား၍ ဿသ. သနာအလံ(၁၀)လက်လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ။ ဘဲဥတွင် အမည်ရေး၍ ပေါက်ခွဲပါ။
အသက်…၇၊၁၅၊၂၃၊၃၁၊၃၉၊၄၇၊၅၅၊၆၃၊၇၁၊၇၉၊၈၇၊ ၉၅၊၁၀၃ နှစ် အတွင်း၌….
တနင်္လာ သက်ရောက် ဖြစ်၏
ဤကာလ၌ သာမန် အခြေအနေမျိုး မှနေ၍ စီးပွား အရှိန်အဟုန်နှင့် တက်ကာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်ဖြစ် သွားတက်၏။ မိမိ အားပြသနာလုပ်နေ သူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်။ မသင့်မြတ် သူများနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ် သွားမည်။
အရေးကြီးသော ကံများကို ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်အရေးကြီးသော အချိန်အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။ ဤအချိန်၌ မထိန်းသိမ် းနိုင်လျှင် နောင်(၃)နှစ် ကြာသောအခါ စီးပွားပျက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ကြုံခြင်းဖြစ် တတ်၏ ။
အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာ ဝင်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရ တက်သော ကာလဖြစ်၏။ အထက်လူကြီး မိသားစုအကြီးအကဲများကြောင့် စိတ်ညစ်ရ မည်ဖြစ်၏။ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင် မည်ဖြစ်၏။
ခရီးများမကြာခန ထွက်ရ တတ်၏။ ထိုခရီးများ သည်လဲ အကျိုးပေးအောင်မြင်မည်။ ဝန်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူး တက်ခြင်း၊ အခြေအနေမြင့် တက်ခြင်းကြုံရ လိမ့်မည်ဖြစ်၏။ ပညာရေး ကိစ္စများ၊ သင်တန်းကိစ္စများကို အကြောင်းပြု၍ စိတ်ညစ် ရတတ်၏။
ရွှေထွက်ခြင်း ရွှေအတွက်ပြော ဆိုဖြေရှင်း ရခြင်း ကြုံရတတ် ၏အောက်လက်ငယ်သား၊သားသမီး ထွက်သွားခြင်း ၎င်းတိုအတွက် သောကရောက်ခြင်းများကြုံရတတ်၏။ဆီးချိုရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါများ ဒုက္ခပေးခြင်း အစားမှားခြင်း၊
ဆေးမှားခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ ၊စာချုပ်ကိစ္စများအတွက်စိတ်ညစ်ရခြင်းများကြုံရ တတ်၏။ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို ကောင်းစွာ အကူအညီပေးနိုင်၏။ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်ကို စိတ်မဝင်စားခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းလို စိတ်များကြုံ လာတက်၏။
တနင်္လာ နေ့၌ တန်ခိုးကြီးဘုရား တစ်ဆူတွင် တံခွန်လုံး(၉)လုံး လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ။အရူးကို အာလူးကြော်ကျွေးပါ။
အသက်…၈၊၁၆၊၂၄၊၃၂၊၄၀၊၄၈၊၅၆၊၆၄၊၇၂၊၈၀၊၈၈၊ ၉၆၊၁၀၄ နှစ် အတွင်း၌…
အဂါၤ သက်ရောက် ဖြစ်၏
သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း ဘုရားဆင်း တုတော်ပုံတော် ရဟန္တာ ပုံတော်များကြွလာတတ်၏။ မထင်မှတ်ထားသော ခရီးများ၊ မရည်ရွယ်သော ခရီးများ သွားရ တတ်၏။ လူမျိုးခြားကူညီခြင်း နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သတ်သော
ကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်းများ ကြုံရ မည်ဖြစ်၏။ နာမည်ဂုဏ် သတင်းတိုးတက်ခြင်း ဘုန်းတန်ခိုး တိုးတက်ခြင်း များကြုံရ မည်ဖြစ် ၏။ မနာလိုသူ လဲပေါ လိမ့်မည်။မိမိထက် မြင့်သူနိမ့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေး တတ်သော ကာလဖြစ် ၏။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ မိတ်ရင်းဆွေရင်း များနှင့်လမ်းခွဲ ရတတ် သည်။ စနေနံ ပစ္စည်းများဝင်လာလိမ့်မည်။ ရေတွင်းရေကန် ကိစ္စများအောင်မြင် မည်ဖြစ်၏။ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်တော့ မလိုလိုနှင့် အခက်အခဲကြီး စွာကြုံရ တတ်၏ကြီးကဲ သူများ အထက်လူကြီးများကြောင့် စိတ်ညစ် ရတတ် ၏။
အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲ အစီအစဉ်များ အထစ်အငေါ့ကြုံခြင်း ရက်ရွှေ့ခြင်းများ ဖြစ်ရတတ်၏။ အိမ်ထောင်ရှိလျင် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနေမည်။
လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်နေ မည်။ ပြောင်းလျှင် ပိုဆိုးသွား တတ်၏။အစာအိမ်ဖြစ်ခြင်း ကျန်းမာရေး ညံ့၍ ခြေထောက်၊ခါး၊သွား ဒုက္ခပေးခြင်းကြုံရတတ်၏။
ဤကာလအတွင်း အမှုအခက်းမဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ဖို့လို့ပေ၏။ဖြစ်ခဲ့လျှင်မပြီးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်၏။ ငွေနှင့် လိုက်လျှင် ရှုံးသွားတက် ပါ၏။ ပစ္စည်းမငှါးရမ်း ပါနှင်။့ ဆုံးသွားလိမ့်မည်။
ဤကာလအတွင့် မည်သည့် အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည်ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာပါနှင့်။ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာပေါ်လာ တတ်၏။ အောက်လက် ငယ်သား ထွက်သွား တတ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးညံံ့ခြင်းကြုံရ တတ်၏။
ထီဘက်၌ ကံကောင်းသော အချိန်ဖြစ် ပါ၏။ ပညာအသစ် တစ်ခု ရတတ်၏။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံလိမ့် မည်။ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းသွား ရတတ်၏။ ကျောဒုက္ခပေးခြင်း၊ကျော၌ကျန်းမာရေး ညံ့ခြင်းရောဂါ ရခြင်းများဖြစ် တတ်၏။
စနေနေ့နံနက်တွင် အိမ်ဘုရား၌ မုန်ဖက်ထုပ် ၁၂ ထုပ်လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ။ သခွားသီးတွင် သွားကြားထိုးတံ သက်စေ့ စိုက်၍ ရေမျောပါ။
Categories Baydin Post navigation
စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ စဥ်းစားတဲ့အခါ မုဆိုးလိုကျင့်ပါ …